musha Africa PSquare Urwere Nhau Nyaya yezve Untold Biography Facts
CB inopa Iyo Biography yaPaul naPeter- vaviri Musical Geniuses akambozivikanwa neNickname yavo 'PSquare'. Tinokuunzira nhoroondo yakazara yeanozivikanwa ezviitiko kubva paudiki hwavo nguva kusvika zuva. Kuongorora kunosanganisira yavo nhoroondo yehupenyu pamberi pemukurumbira, hupenyu hwehukama, hupenyu hwemhuri uye zvimwe zviripo uye pa-screen zvishoma-zvinozivikanwa chokwadi nezvavo.
Hongu, munhu wese anoziva nezve mapatya ari shure kwezita rekuti PSquare asi vashoma vanofunga nezvehupenyu hwavo hunonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve nzira, ngatitangei.
PSquare Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Upenyu Hwekutanga
Mapatya kumashure kwezita rezita- 'Psquare' vakazvarwa pazuva re18th yaNovember 1981 muAnambra state, Eastern Nigeria. Ivo vakazvarwa kuna amai vavo, Gare gare Mai Josephine Okoye, uye baba, Late Pa Moses Okoye.
Mapatya maviri aya akakurira mudzidziso dzeKaturike muJos, Plateau State, Nigeria. Vakaenda kuchikoro chesekondari cheSt. Mulumba, chikoro cheKatorike. St Mulumba sekondari chikoro ndicho chakabvumiranwa vaviri vacho nekuti chikoro ichi chaive nekirabhu yemimhanzi nedrama.
Vose vari vaviri vakatora zvakakodzera mimhanzi uye drama yekambani kuti vakwanise kuimba kwavo uye kutamba mitambo, kutevedzera nziyo na MC Hammer, Bobby Brown naMichael Jackson.
Vakazogadzira boka revanhu vashanu reacapella rakanzi "MMMPP" (M Clef, Michael, Melvin, Peter, naPaul). MMMPP yakadonhedza M Clef, kozoti quartet "MMPP" yakazoumbwa, uye pamwe chete vakaumba boka rakanzi "Smooth Criminals" muna 5. Maitiro avo akasarudzika ekuimba uye nesimba dhanzi dhizaini zvakaita kuti vave nemazita emhuri muguta reJos mavaitamba ku mabasa echikoro uye dzimwe nguva.
PSquare Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: University Days
Gare gare mu1999, vakashandisa kudzidza kuBusiness Administration paYunivhesiti yeBudja. Pasi pane mufananidzo waPeter naPauro neyunivhesiti shamwari.
Sezvo kubvumidzwa kupihwa kwavari, Smooth Matsotsi akaparadzwa. Izvi zvakatungamira mukuumbwa kweboka idzva naPeter & Paul iro rakatanga kunzi "Double P", "P&P", uye "Da Pees". Vakazogara pa "P Square".
Vachiri kuUnited States vakanyoresa muchikoro chemimhanzi kuti vadzidze unyanzvi hwavo pa keyboard, madhiramu, mabhasi uye rhythm gitare. Basa ravo rinobatanidza kurira kwemafirimu akawanda akadai saTobbi, amai veSvondo, nguva yekutsamwa, Evas River, kutaura zvishomanana.
Hazvina kutora nguva vasati vaita mukurumbira muNigeria yese, Africa, nepasi rose. Vamwe vese, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
PSquare Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Ukama Hupenyu hwaPetro Okoye
Nyaya yaPeter Okoye yerudo yakatenderedza mukadzi mumwe chete. Hakuna mumwe munhu kunze kwaLola.
Hukama pakati paPeter naLola hwakatanga makore mazhinji apfuura, kunyangwe Peter asati ave mukurumbira.
Chokwadi, Zvinotora hushingi hwakawedzera kuti murume afambe achienda kune mukadzi akaita saLola. Peter akazviratidza semurume, achitevera nyaya pfupi naLola iye. Iyi ndiyo nhoroondo yaLola yekuti vakasangana sei
Mumashoko ake; … “Sangano rangu rinobata mamwe emhando dzefodya dzeBritish American uye P'Square yanga ichiitira isu chimwe chiitiko chedu kuEnugu. Kunyangwe ini ndanga ndasangana kwenguva pfupi naPeter akati wandei zvisati zvaitika. Pakuratidzwa, kwaive kune mamwe makemikari. Akakumbira nhamba yangu ndikaramba kumupa. Ndakamuudza 'kana uchinyatsoda kundiziva, unofanira kuwana nhamba yangu'. Saka akazvitora sebasa akawana nhamba yangu uye zvimwe zvese nhoroondo. ”
Lola ane makore manomwe akura kupfuura Peter Okoye, imi vaviri vadikani hamumbovhiringidzike nezera ravo musiyano. Sezvo Lola anozviisa; “Peter mweya wekare uye anogara achindiudza, anoona mukadzi ane makore makumi maviri nematatu mandiri. Chokwadi, zera ingori nhamba ”.
Peter neChipiri akavhundutsa vazhinji vevateveri vake paakazopfimba kuna Lola Omotayo, musikana wake wenguva yakareba aine ringi yedhaimani uye chena nyowani Range Rover Vogue yaakatenga nemamirioni gumi nemashanu naira.
Lola, uyo akati 'Hongu' kune zvaakataura, akazviti akanga ava pedyo nemisodzi apo muimbi akadzingira dhinari yekusungira rin'i mumunwe wake ndokupa zvigaro zvemotokari kwaari.
Achitaura nezve chikonzero nei akafunga kufonera Lola, Peter akati: "Chinhu chinhu chandagara ndichida kuita uye ndaiziva kuti chokwadi ndichaita izvi kuna Lola, asi ini ndaifanira kumirira nguva chaiyo." Nokutendeseka, akakodzera kutonyanya kubva kwandiri. " akati.
Muchato wavo wechinyakare ungangove waive mutambo wegore. Muchato waPeter Okoye wakapindwa nevashanyi vane mukurumbira munyika.
Mr. naMai Peter Okoye vakaropafadzwa nevana vaviri; Cameron naAliona Okoye vanoratidzwa pazasi.
Peter mune imwe hurukuro yePunch akati: "Kwatiri, mazuva ese izuva raValentine nekuti hatimbokundikana kuratidza rudo rwedu kune mumwe nemumwe mazuva ese."
PSquare Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Ukama Upenyu hwaPaul Okoye
Yakanga iri shamwari-yakava-mudiwa nyaya yaPauro naAnita avo vanoita sevari rudo rwake rwekutanga. Anita aiva mutsva apo Pauro aiva mugore rake rokupedzisira pavakasangana paYunivhesiti yeBudja, Nigeria.
Paul akatanga kupwanya Anita uye zvishoma mushure mekunge vaita shamwari. Zvese zvaive zvisina kujairika pakutanga. Anita aingova namakore gumi nematanhatu panguva iyoyo saka Paul akaramba aine basa uye akarongeka kusvikira Anita akura. Sezvo Anita akavhara makore gumi nemasere ekuberekwa ivo vaviri vakatanga zviri pamutemo kufambidzana. Kubva pane zvese zviripo ruzivo, Anita ndiye rudo rwekutanga rwaPaul.
Kutasva kwacho kwanga kusiri nyore kuna Paul padanho rekutanga. Kushanya kwake kwekutanga kuna Anita kwakanga kusinganakidze. Anita haana kumutendera kupinda mumba. Iye-mukomana-mukomana haana kukanda mapfumo asi aifanira kusimudza mutambo wake. Akamutengera chipo chekutanga cheZuva raValentine- bhaisikopo, raitamba nyeredzi Genevieve Nnaji, nekuti Anita aive fan guru reGenevieve.
Vakatanga kudanana, uye pazuva iri rine rufaro, Paul akaenda naAnita kuchitoro chezvishongo akamukumbira kuti atore chero mhete yedhaimani yaanoda; paive nemhete gumi pamberi pake. Akaita sarudzo yake, uye ipapo ipapo Paul akadonha pabvi rimwe ndokubuda mubvunzo, 'uchandiroora here? Wow! Icho chiitiko chekamwe kamwe uye chisina kujairika cherudo. Anita akashamiswa chose, zvese zvaaigona kuita kuchema, uye mhinduro yake inoratidzwa mumufananidzo pazasi.
Paul Okoye naAnita Okoye vakaita mhemberero yavo yemuchato mu2014 uye vakanyoresa hukama hwavo zvakare kuIkoyi Registry.
Muhurukuro naNaija.com Anita Okoye akapupura; "Kuroora kwangu kwave kunakidza kwazvo".
Sezvo akakomborerwa nemwanakomana wavo wokutanga, Andre uye boka remawele, Nadia naNatani, zvechokwadi marato avo zvechokwadi anonakidza.
PSquare Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Kuparadzana
Vanoti "Vana makumi maviri havatambe vese kwemakore makumi maviri" asi, Petro naPauro havasi shamwari chete asi vakomana vaviri vakafanana. Kunyange zvakadaro, inoita sey 'play' pakati paPeter naPaul chapera. Zvine here? Vanguard Report inosimbisa kuti tsamba yakatumirwa kugweta rePSquare Festus Keyamo (SAN) nehafu yemapatya, Peter, achikumbira kubviswa kwechibvumirano chavo seboka.
Nhau dzezvemagariro dzevanhu dzakave dzichibvira sezvo vateveri vePacquare vakatanga kutora kupera. Mibvunzo yakabvunzwa, kuona zvinyorwa zvakasiyana uye zvinyorwa kubva kuna Peter naPauro.
Mukubvunzurudzwa na Guardian Life, Petro kumubvunzo pamusoro pePecquare kuputsa, mhinduro: “Ini handichaite bhizinesi remhuri. Hazvina hutano. ”
Saizvozvowo, Pauro akanyorera pa Instagram kwete chaizvo, achiti; "Mukadzi chete ndiye anokwanisa kuuya kune rugare uye achiiparadza". Ndokumbirawo kuti mukadzi upi waari kutaura nezvake? Zvakanaka, ngatirege kuzviita gakava asi batanidza masimba uye tinamatire Peter & Paul.
PSquare Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Upenyu hweMhuri
BABA: Jos-based baba vemimhanzi inonakidza duo, Pa Moses Okoye, anobva kuIfite Dunu, Anambra State. Aive nebhizimusi remvura rakachena uye rekubheka muJos.kusvika Muvhuro, Mbudzi 24, 2014, akafa neCardiac kusungwa kuma 11:30 pm paP-Square's Omole mansion inozivikanwa kuti Square Ville.
Pa Okoye aka "Jagwa" sezvo aive achidaidzwa kunzi aive munhu aidavira mune dzidzo kuvana vake asi, kutenda Mwari nekuda kwetarenda, chipo, uye chido chakakonzera PSquare akapfuma kwazvo, nenzira, duo haisi kunyora.
AMAI: Amai Josephine Okoye amai ve PSquare ndivo amai vakanaka vevana vane 7. Sezvo ari mufundisi, akamira senhongwe nemasana kune vana vayo vose kunyanya PSquare. Zvinosuruvarisa, akapfuura pfupi mushure mekuvhiyiwa kwemoyo mune chipatara cheIndia.
Petro akati amai vavo vaizoshungurudzika zvikuru, kwete nekuda kwekuti ndiye amai vavo, asi nokuti akaita basa rinokosha mukubudirira nyaya yeP-Square sezvaaitsanangura, "Ndinogona kuyeuka kuti aimbotidzinga usiku ndokuenda kumitambo pasina kubvumirwa nababa vedu vakatsigira kuti tinofanira kusiya mimhanzi kuti titarise zvidzidzo zvedu," Petro akati.
HANZVADZI KONAMA: Judha Okoye mukuru hama kusimudzira kugadzira mapatya, P-Square. Ndiye Mumhanzi vhidhiyo director.
Ari kufara akaroorwa nemudzimai wemudzimai, Ifeoma, aimbova Miss Tourism beauty queen. Ivo vose vane vanasikana vaviri; Emma naEleanor Okoye.
Kunyangwe basa raJude richigadzira nziyo dzeva duos nekutungamira mavhidhiyo avo, anogara achiziva nezve chinzvimbo chake uye haazeze kukuudza kuti ndiye mukuru.
Mumashoko muhurukuro; “P-Square inotonga pasi asi nyika ndeyangu. Saka, 'Ndini shefu. Ndinovadzingira kunze nekuti ndivo mucherechedzo, ini ndiri wako uye ndinomhanyisa iyo ".
TONY OKOYE: Tony Okoye ndiye mukoma mukuru wePSquare. Art yakagara iri nzira yake yehupenyu. Iye wekutanga kirasi akapedza kudzidza kweCreative Art, University yeMaiduguri. Aive nenjere dzakasarudzika hurukuro dzake dzaitaurwa kwaari sa “Pfuma”. Iye ndiye CEO uye uropi shure kweAjehwears uye zvirongwa zvake zvinobva kune unyanzvi hwechokwadi hweAfrica netsika uye zvakave zvakasikwa kubvira 1996.
PSquare yakapfeka maAjehwears yakapa kumeso kune basa raTony. Vakakurumbira ikozvino dombo Ajehwears pane yakajairwa naPeter naPaul vachitungamira.
Petro naPauro vachiratidza majeredzi maitiro.
HANZVADZI SIKANA: Lillian Okoye ndemumwe wehanzvadzi dzePSquare. Akadzidza Veruzhinji Admin paUniversity yeJos.Iye zvino ari mufashoni uye runako chipangamazano. Anomhanya FIXX Runako Shopu, yake Yemeso Kugadzira uye bhizimusi remafashoni muPlateau State, Jos.
PSquare inewo vamwe vana vatatu, iko; Ifeanyi, Henry, uye Mary Okoye.
Tinokutendai nekuverenga yedu PSquare Yehucheche Nyaya pamwe neiyo isingazivikanwe biography chokwadi. At ChildhoodBiography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!